Picasa Web Albums - Myo Chit Myanmar
Myo Chit Myanmar's Gallery
မြတ်ကေသီအောင် ၏ တူတော်မောင် ရှင်ပြုပွဲ (California)
Please read more at - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2012/05/los-angeles.html
Drunk Actor Min Oat Soe
" Drunk Actor Min Oat Soe "
Myanmar Actor Min Oat Soe got drunk and behaved as an animal.
Contents of this album are extremely graphic.
No one under 18 is allowed.
Do not proceed if you are under 18.
" သရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုး အရက်မူးလွန်၍ လူပုံအလယ်တွင် အရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့စွာ ရမ်းကားနေပုံ "
လူ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဆန့်ကျင်သော ပုံများပါဝင်ပါသည်။
အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်များ မကြည့်ရ။
My best friend Okkar help me createapromo picture for me today.
It took us almost eight hours to finalized one picture of myselves.
Needless to say, all credit goes to Mr. Okkar Kyaw (L.A).
I am so pleased to see this!.
Original Link - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2012/02/one-men-band.html
ဒီနေ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ဥက္ကာကျော် (L.A) နဲ့ ချိန်းပြီး ကျွန်တော် ရိုက်ချင်တဲ့ အိုင်ဒီယာလေး တစ်ခု ကို သူလုပ်ထားတာ သဘောကျတာ နဲ့ အမှတ်တရ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အစကတော့ Outdoor မှာ Instruments တွေ နဲ့ ရိုက်မလို့ကနေ
အချိန် ရော လူရော မလုံလောက်တာနဲ့ Indoor Shots တွေ ဘဲ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နေ့လည် ၃ နာရီ လောက်က စရိုက်ပြီး Edit ထိုင်လုပ်လိုက်ကြတာ ည ၂ နာရီ ထိုးတဲ့အထိပါဘဲ။
အချိန်ကုန်လူပန်းခံပြီး မေတ္တာနဲ့ ကူညီခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ဥက္ကာ ကို မျိုးချစ်မြန်မာ မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ ။
မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2012/02/one-men-band.html
F.F.S.S MEETS PRESIDENT OF MYANMR
မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/08/blog-post_18.html
ဓါတ်ပုံ - http://thevoicemyanmar.com/
Kyaw Thu is Back
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း NewsWatch Weekly (စောင့်ကြည့်သတင်း) ဂျာနယ်အတွက် သတင်းသမား မနွယ်နီ လာရောက်မေးမြန်းချက်များကို ဖြေဆိုထားသော ကျော်သူ၏ အဖြေစကား များကို ၁၀.၈.၂၀၁၁ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) NewsWatch Weekly (စောင့်ကြည့်သတင်း)ဂျာနယ် အတွဲ - ၇၊ အမှတ် - ၆ ထုတ်တွင် ပါဝင်မှုတို့ကို တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာ ဖြတ်သန်းကျော်လွှားရတဲ့ နယ်ပယ်တွေက တော်တော် များပါတယ်။ နှစ်သစ်တစ်နှစ်ကိုရောက်တိုင်း၊ နှစ်ဟောင်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီးတိုင်း လူတိုင်းလိုလို ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားလုံးအရ “နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေကုန်ဆုံးပြီး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါ စေ” လို့ ဆုတောင်းပေးကြလေ့ရှိပေမယ့် တကယ်တော့ နှစ်ဟောင်းက အရာတွေဟာ ကုန်ဆုံးတယ် လို့ မရှိဘဲ ကိုယ့်နောက်က အရိပ်တစ်ခုလို အမြဲလိုက်ပါနေတာပ။ ကောင်းခြင်းတွေကိုပဲ သယ်ဆောင် လို့ မသွားနိုင်သလို ဆိုးခြင်းတွေကို ချန်ထားရစ်ခဲ့လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/08/blog-post_2084.html
Yaway Nwe Sayadaw's Seminar
အရှင် ရာဇိန္ဒ (ရဝေနွယ် - အင်းမ) ဆရာတော် ၏ တရားအလှုပွဲ
(ရဝေနွယ် - အင်းမ) ဟူသော ကလောင်နာမည် ဖြင့် ဘာသာရေးစာပေများရေးသားခြင်းဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး ကြည်ညိုသူ တကာ တကာမ များပြားလှသော ဆရာတော် အရှင် ရာဇိန္ဒ သည် အမေရိကန် နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် တွင် ခေတ္တ ရောက်ရှိနေစဉ် (အဇူဇာ ကျောင်း ဟုလူသိများသော) သုန္ဒရာရာမ ဗြဟ္မဝိဟာရ ကျောင်း တွင် တရားအလှူပွဲ ကျင်းပဟောပြောခဲ့ပါသည်
တရားပွဲအား မေ လ ၁ ရက် နှင့် ၂ ရက် သာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။
Bomb exploded in Myanmar's water festival.
Pictures taken by Blogger Nyi Lin Seck after three bombs exploded at Kan Daw Gyi on Apr 15th 2010 on Myanmar famous water fesitval known as " Thin Gyan ".
Official sources said atleast9dead and 94 wounded in critical conditions.
Nature's wonderful moments caught on cameras.
Natural Bridges of Cherrapunjee, India
62nd Anniversary of Chin National Day
62nd Anniversary of Chin National Day was held at Aung Zay Hall in Monterey Park, California (U.S.A) on Feb 20th 2010.
Burma VJ Pre - Oscar Show
Pre-Oscar show of "Burma VJ" for the "The Best Documentry Film" category.
Media & political related guests attended.
Photos from trip to Grand Canyon, Arizona
Photos from trip to Hoover Dam
Photos from trip to Las Vegas on Christmas Day, 2009.
Baby Hamsters (So Cute :P)
ညီလေးက သူ့ကောင်မလေး ကို Christmas Gift ပေးဖို့ ဝယ်လာတဲ့ Hamster လေးတွေကိုရိုက်ထားတာ
အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာဘဲ ညည ဆိုလဲ မအိပ်ကြဘူး အဲ့ဒိ အဝိုင်းလေးထဲ ပတ်ချာလှည့်ပြေးနေကြတာ ခစ်ခစ်
Awesome Japanese Bonsai Trees
Look at the amazing works of one of the most patient men in the world.
The animal shapes created with different fruits
Village lives from Laos
Dhamma Joti Meditation Center's Fund Raiser
Fund Raising events held on Dec 6th, 2009 at Monterey Park, California, U.S.A
L.A Literature Talk
Mahatma Gandhi's Funeral
Water Melon Art
Harbin Ice and Snow Festival of China
U Ottama's 70th Anniversary
Two headed baby was born in Myanmar
Two headed baby was born in Kyawk Mae, Myanmar | Aug 31st, 2009, who later died not long after birth.
Most emailed pictures
Images Of Burma's History
Caves from Myanmar
WOOD WORK HASTKALA
Golden Days Of Myanmar
Tricks of your eyes
Photos Never Lies
DASSK's 64th BDay
Plane Crash in Sittwe
Beautiful Scenes of Myanmar
At SHWETAGON PAGODA
Cute Paintings on stones
A Phay 2
T4T LA Trip
4 months after nargis
Paw Taw Mu
How to make the Olympic Games even more interesting in 2008!
One month after nargis
Ayeyawady Relief (May 29th - Jun 3rd)
Sitagu Sayardaw's Donations ( June, 2nd, 2008 )
Ayeyawady Relief 29 May -3Jun
1 month after Cyclone Nargis
Nargis Aftermath part II
Myo Chit Myanmarphotos
"wow....50D!! i like it ;)"
San Myo Pan
"save to face book"
"shame on humanity.......she need help"
"All of your photos are very useful evidence and wereareal historic occasion of our country.